Iran: Nivoaka Ny Efitra Ireo Diplaomaty Nandritra Ny Kabarin’i Ahmadinejad · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Oktobra 2017 12:56 GMT
Vakio amin'ny teny Português, Français, 繁體中文, 简体中文, عربي, Español, Nederlands, বাংলা, bahasa Indonesia, English
(Marihana fa efa nivoaka tamin'ny volana Aprily taona 2009 ny lahatsoratra tamin'ny teny Anglisy)
Nipoitra tamin'ny lohatenim-baovao lehibe indray ny filoham-pirenena Iraniana Mahmoud Ahmadinejad androany, raha nanondro an'i Isiraely ho “fanjakana mpanavakavaka” tamin'ny kabariny nandritra ny fihaonamben'ny Firenena Mikambana momba ny fanavakavahana tany Genève, Soisa. Nivoaka ny efitra ireo solontena avy amin'ny firenena Eoropeana maromaro ho fanoherana ny fanamarihan'i Ahmadinejad.
Namoaka ity lahatsary manaraka mampiseho ny fivoahan'ireo diplaomaty i Jomhour :
Nanao fampitahana teo amin'ity tranga ity sy ny kabary nataon'ny filoha Iraniana tao amin'ny Onivesiten'i Kolombia tany New York tamin'ny taona 2007 ireo mpaneho hevitra.
Nilaza i Ghommar fa afa-baraka indray teo anoloan'ny fiarahamonina manerantany noho ny filohan'izy ireo ny Iraniana. Hoy izy raha nanoratra:
Zavatra tena mahatsikaiky sy maharikoriko izany hoe filoha ao amin'ny fireneny manokana miatrika fanitsakitsahana ny zon'olombelona marobe… izay tsy manana zo fototra indrindra tahaka ny [misafidy] ny fitafian'ny vehivavy, ary feno gadra politika sy ara-poto-kevitra ny fonja … kanefa miresaka momba ny fanavakavaham-bolonkoditra sy ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona any amin'ny firenena hafa ao amin'ny Firenena Mikambana.
Nilaza i Zarehbin fa ny zava-misy tamin'ny fialan'ireo delegasiona samihafa nandritra ny fihaonambe dia mampiseho fa tena hankahalaina eto amin'izao tontolo izao i Iran. “Tena firenena mahantra isika, manana ity jiolahimboto [Ahmadinejad] ity ho filohantsika… raha misy fitondrana manasazy ny Bahai sy ny [fiarahamonina] hafa ao Iran, ahoana no hanohanana ny zon'ny Palestiniana.”